Zirconia Opaqueness & Shade imiba emva kweSintering-News-VSmile Co., ltd
Zirconia Opaqueness & Shade imiba emva kokuSintering
Ixesha: 2021-04-13 I ngxelo:48
Sifumene imibuzo emininzi malunga nokuntywila kwiilebhu ezahlukileyo kule minyaka imbalwa idlulileyo, ngoku besifuna ukwenza umsonto apho yonke le mibuzo kunye neempendulo zinokuba kwindawo enye, ukwenza kube lula kubantu ukuba baphande kamva. Ke nayiphi na imibuzo onayo malunga nokuntywila uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi kwaye uVsmile uya kukunceda.
U-Opaque kwaye ujonge ukufa emva kokuntywila?
Njengoko sonke sisazi, i-tI-ranslucency ye-zirconia inxulumene nesixa kunye nohlobo lwezongezo, ubushushu bokuntywila, iimeko zemozulu ngexesha lenkqubo yokuntywila, kunye neendlela zokufudumeza. Ngokukodwa, ubushushu bokugqibela benkqubo yokuntywila kunye nendlela yokufudumeza esetyenzisiweyo kukuchonga ngokuthe ngqo kokuxinana, iporosity, kunye nobungakanani beenkozo ze-zirconia.Utshintsho kwiimeko zokuntywila luza kutshintsha ukuguquguquka kwesiseko se-zirconia.
Obona bushushu bokuntywila abufikeleli kubushushu obufunekayo, le zirconia are ingaphekwanga - Enye ingxaki esiyifumeneyo, uninzi lobushushu besithando somlilo buqhubela phambili ngaphezulu kwexesha. Ke, i-1450 kunyaka ophelileyo inokuba yi-1550 ngoku. Linganisa zonke iinyanga ezi-3 ukuya kwezi-6 ngaphandle kophawu lomlilo. Ukuba ufumanisa ukuba umoya uvaliwe ngaphezulu kweedigri ezingama-25, calabrate rhoqo rhoqoo vavanya ubushushu besithando sokuntywila rhoqo kwiinyanga ezintathu ukuya kwisiqingatha sonyaka, oko kuya kuba yimfuneko.
Ulahlekile dukuhlekisa ukwenziwa Kwisisombululo sokwenza idayi emva kokuntywila, kwaye iziko lomlilo liya kungcoliseka emva kokuntywila kunye nokuntywila ngaphandle kokuma - coca iziko, bvusa inkunkuma zirikhonkco(ezimhlophe zirI-conia disc-HT ST UT) kwiziqwenga ezincinci ze ubungakanani 5-10mm. Thatha iziqwenga ezi-4-6 kwaye uzibeke kwitreyi yokuntywila (kwi-crucible), gubungela ukuzaliswa, thatha omnye Iziqwenga eziyi-8-10 kwaye uzibeke kwigobolondo, ubeke ipleyiti yokuntywila embindini weziko.
Inkqubo yokuCoca: igumbi lobushushu --- 10 ℃ / min inqanaba lokufudumeza --- ukufudumeza ukuya kuthi ga kwi-1600 ℃ --- ukugcina ukufudumala iiyure ezimbini -ukupholisa kwendalo. Ukutshisa okuphindaphindiweyo ide i-zirconium emhlophe inombala oqhelekileyo, kunye neziko ucocekile.
Yuza kufumana i-zirconia ngokucoceka ngokujonga ezi ngcebiso zilandelayo:
Ukucoca isigaba sokuphatha kunye nokuphatha kuyafana (umoya, ibrashi, iiglavu)
Sebenzisa umbala ofanayo utywala ngomsebenzi omnye (I-ZZ Acid esekwe)
Iibrashi zineentsimbi ezikhululekileyo
Ukuchaneka dukuhlekisa ukwenziwa
MQinisekisa ukuba Izinto zokufudumeza kunye tngqumbo eziko tshintsha ngaphambi kokubetha iiyure ezicetyiswayo
Amaso ayatshintshwa qho ngeveki
Akukho zitreyi zintsha zintsha, akukho zakudala
Iinkqubo zokucoca indawo ziyacetyiswa ngumenzi
Iziko lomlilo licinga ukuba izinto zilungile (akukho zimpazamo, akukho kutshintsha-tshintsha okwangoku, iinkuni zibukeka zilungile)
Eminye imibuzo onokuthi ube nenkxalabo yokuprinta:
Ngaba umxholo we-Yttria uyaliguqula ixesha le-zirconia kwisinter okanye ubushushu obuphezulu bokuntywila?
I-Yttria sisistabalizer njenge-zirconia ngokwayo iyinto engazinzanga. Ukongeza amanani ahlukeneyo e-Yttria kutshintsha iipropathi zirconia okt. Ukuguquguquka kunokuchaphazeleka ngokongezwa kwamanani amancinci eYttria. Oko kuthethwa ukuba umxholo we-Yttria awulitshintshi ixesha lokususa i-Tetrahedral ye-zirconia.
Yeyiphi eyona ikhawulezayo unokupholisa i-zirconia?
Isiqhelo esicetyiswayo kukuba upholise i-8-10 degrees celcius ngomzuzu ukuya kwi-450 degrees celcius kwaye emva koko upholise ngokwendalo kwigumbi lobushushu.
Ngaba ukuphakamisa / ukwehlisa ubushushu bokuntywila kutshintsha indlela zi zijongeka ngayo?
Ukuba kunjalo kwenzeka ntoni xa ugxothwe kakhulu? Ephakamileyo kakhulu?
Impendulo: Ewe itshintsha i-Aesthetics ye-zirconia ngendlela enkulu. konke kuxhomekeke kwimozulu kukuphakama okuphezulu kwe-zirconia, i-zirconia ephantsi yokuxuba, i-cubic zirconia, i-tetrahedral zirconia okanye i-zirconia ene-shaded. Ubushushu beSintering Hold budlala indawo enkulu yokuba isiphelo sale mveliso siza kuphuma njani.
Typically ukuba uyayitshisa i-zirconia ukuya kubushushu obuphantsi umbala awuyi kuchaneka kwaye iya kuba kukujonga okungafakwanga chalky. Ukuba ugxothiwe phezulu kuxhomekeke ekubeni uphakame kangakanani u-ether uphume ubisi okanye uphakamise ukuguquguquka kwe-zirconia. Umzekelo: ukuba udubule isithsaba ngo-1540DegC kwaye wafuna ukuguquguquka okungakumbi kwaye wawukhuphela ukuya kuthi ga kwi-1550DegC unokufumana ukuguquguquka okungaphezulu kodwa ukuba uhamba kakuhle ngaphezulu kwengcebiso yale zirconia iya kuphuma Iziphumo ezilungileyo.
Ngaba amaxesha okusika axhomekeke kwiziko okanye uphawu lweZr?
Ukuba amaxesha axhomekeke kuhlobo lwezixhobo, ngubani onikezela ngesantya sokukhawuleza uZr?
Akunjalo, kuxhomekeke kwisiphumo esifunekayo.
I-zirconia nganye inayo iinkqubo ezinconyelwayo zomenzi-mveliso sintering (ihlala iyinkqubo esemgangathweni kunye nenkqubo yesantya). Kwaye ukuba baneefanitshala zokucoca ezahlukeneyo, banokuba neenkqubo ezahlukeneyo ezisekwe kwi-zirconia nakwitekhnoloji yesithando somlilo. NDIHLALA ndicebisa ukuba uthethe nomenzi wakho we-zirconia ukuze ufumane iiparameter zokuvuma izinto ezivunyiweyo, njengoko besazi ukuba kuyasebenza. Njengoko uphuma ngaphandle kwezi, izinto azixeli kwangaphambili.
FI-ast sintering (imizuzu engama-75 yokukhuphela enye, imizuzu engama-90 yesakhelo sebhulorho) iyafezekiseka kuba awuyidingi / ufuna ukuba ezi zinto zigqithise ngokwenene, ufuna amandla kwaye uza kubeka ngokupheleleyo ulungelelwaniso lweeesthetics. Kodwa akufuneki ucinge ngokwenza inkqubo yokuntywila ngokukhawuleza (imizuzu engama-75 / imizuzu engama-90) kwizithsaba ezigcweleyo kunye neebhulorho ngaphandle kokuba umenzi akunike iiparameter ezifanelekileyo (kukho ezinye ezisebenzayo, kuxhomekeke kwinto leyo, kodwa zimalunga neeyure ezi-3. kunye neeyure ezi-4.5 ngokwahlukeneyo, AKUKHO UKWENZA ukuba usebenzisa ulwelo olunombala xa uskita ngokukhawuleza).
HLALA usenza inkqubo esemgangathweni (iiyure eziyi-7.5 okanye ngaphezulu, kuxhomekeke kwi-zirconia nakwiziko lomlilo) xa usenza iibhulorho ezide, Zonke-on-4 iimeko, okanye usebenzisa ulwelo olunombala.
I-PREV: I-Vsmile 3D Prism iZirconia Block Cases A3 Ukwabelana
OKULANDELAYO : Ayizizo zonke iiDiskhi zamazinyo zeZirconia zeCeramic Discs ezifanayo eTshayina? Yintoni eyenza iimveliso zakho zahluke?
I-Vsmile Milling Burs i-Wieland ® iZenorech iyahambelana
I-Vsmile Milling Burs Iems-icores Coritec enye 150i 250i 350i 450i ® iyahambelana
I-Vsmile Milling Burs Zirkonzahn ® M1 Soft iyahambelana